Carl Bildt oo dhaleeceeyay Israa’iil - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Doonyo ku sugan bannaanka xeebta Qaasa. Sawirqaade: Hatem Moussa/Scanpix.
UTRIKESMINISTER CARL BILDT KRITISKT TILL ISRAELS VÅLDSAMMA ANGREPP MOT "SHIP TO GAZA"
Carl Bildt oo dhaleeceeyay Israa’iil
La daabacay måndag 31 maj 2010 kl 09.51
Wasiirka arrimmaha dibadda dalkan Iswiidhen Carl Bildt, ayaa dhaleeceeyn dusha uga tuuray dawladda Israa’iil, islamarkaana xarunta wasaaradda arrimmaha dibadda ugu yeeray daljiraha dawladda Israa’iil dalkan u fadhiya.
Amuurtaa ayaa ka dambeeysay ciidammada Israa’iil oo dad ku laayay markab ey saarnaayeen muwaadiniin turki ah, kana mid ahaa maraakiib ay ku raran yihiin taageero loo waday carriga Qaasa oo muddooyinkan dambe ku jirtay cunaqabateeyn.
Maraakiibta ayey sidoo kale saaran yihiin muwaadiniin iswiidhish ah ayna ka mid yihiin qoraaga Henning Mankell, Mehmet Kaplan, ahna xildhibaan baarlamanka u matala xisbiga Cagaaran ee Mp, Mattias Gardell, caalin ku takhasusay taariikhda diinta islaamka iyo dhakhtarad la yiraahdo Victoria Strand.
Wasiirka arrimmaha dibadda dalkan Iswiidhen Carl Bildt, ayaa falkan ku tilmaamay mid aan wanaagsanayn.
- Falkan waa mid cakiran oo halis ah, wuxuuna horseedi doonaa cawaaqib aan wanaagsanayn, sidaa daraadeed ayay muhiim u tahay in la caddeeyo wixii dhacay.
Sidee bay xaaladan u saameeyneeysaa wajiga dawladda Israa’iil?
- Si aan wanaagsaneeyn, haddii aan isticmaalo luuqadda siyaasadda ee maanta, sida uu sheegay Carl Bildt, ahna wasiirka arrimmaha dibadda ee Iswiidhen.
Mar uu wasiirku ka jawaabayay cawaaqibta ka iman karta xiriirka siyaasadeed ee labada dal Israa’iil iyo Iswiidhenna, wuxuu ku jawaabay:
- Aan tallaabo tallaabo horay ugu qaadno. Wuxuu falkan keeni doonaa cawaaqib dhanka diblomaasiyadda ah. Wax caddeeyn uma hayo iney jiraan muwaadiniin iswiidhish ah ku waxyeeloobeen. Inkastay cawaaqib xumo ka dhalan doonto xiriirka u dhaxeeya waddammada dadku ka geeriyoodeen iyo dalka Israa’iil. Aniga ahaan waxay ila tahay in tallaabo guud middaa ey ka qaadaan waddammada xubnaha ka ah ururka midowga Yurub. Waana midda igu dhalisay inaan xiriir la sameeyo Catherine Ashton, ahna wasiirka arrimmaha dibadda ee EU-da si tallaabo culus ee wada jir looga soo saaro falkan. U gargaaridda dadyoowga tabaaleeysan ayaa xaaladan oo kale muhiimadda in la saaro ay tahay. Gacan hayaha koowaad ee wasaaradda arrimmaha dibadda Frank Bellfrage ayaa isaguna xarunta wasaaradda arrimmaha dibadda ku qabtay war saxaafadeed, kadib kulan ay madaxda wasaaraddu la yeelatay daljiraha Israa’iil u fadhiya Iswiidhen. Sarkaakuna wuxuu sheegay. en presskonferens.
-Iney falkan u arkaan shil halis ah lagulana kacay sidii markabka siday kaalmada loogu soo xiri lahaa dekedda. Waana middii ugu wacneeyd in daljiraha Israa’iil looga yeero wasaaradda arrimmaha dibadda. Iyadoona lala socodsiiyay in aannu falkani ahayn mid loo dul qaadan karo. Sidoo kale waxaa laga dalbaday daljiraha inuu caddeeyo sidii wax u dhaceen iyo xaaladda 11-kan muwaadin ee iswiidhishka kuna sugan carrigaa, sida uu sheegay Frank Belfrage.
Sidoo kale wasaaradda arrimmaha dibadda ayaa u aragta khatarta ay leedahay wararka sheegaya in markabka laga kaxeeystay isaga oo ku sugan biyo caalamiya.
- Biyaha caalamiga ah xaq looma laha in maraakiib laga qafaasho. Haddiise markab uu ku jiro xuduudda wuxuu dalkaasi xaq u leeyahay inuu baaritaan ku sameeyo, sida uu heeyadda wararka ee TT u sheegay.
Daljiraha Israa’iil u fadhiya Iswiidhen Benny Dagan ayaa ka gaabsaday inuu wareeysi ka bixiyo kadib kulankii uu la yeeshay saraakiisha wasaaradda arrimmaha dibadda. Inkastuu sheegay iney jiraan dhaawacyo culculus ee loo geeystay qaar ka mid ahaa ciidankii markabka ku degay. Middaasina oo uu ula jeeday in ciidanka la weeraray. Sidoo kale wuxuu daljiruhu dhaleeceeyn dusha uga tuuray urur asal ahaan ka soo jeeda dalka Turkiga ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano IHH, oo sida uu sheegay ah urur xag jir ah, sidaa daraadeedna aaney ka fajicin in quwad la isticmaalay, sida uu sheegay daljire Benny Dagan.